I-Videogiochi isakaza nge-Cloud Gaming di Stadia, iGeforce Manje, i-Playstation Manje 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Kuze kube muva nje, ukuze udlale izihloko zamageyimu wakho wevidiyo owathandayo, bekufanele uthenge ikhonsoli yomdlalo noma usethe i-PC yokudlala ebizayo, futhi ukuze uhambisane nemidwebo enemininingwane eminingi, bekufanele sibuyekeze ikhompyutha njalo noma siyithenge. ikhonsoli entsha cishe yonke iminyaka engu-3-4. Kepha ngokuxhumeka kwe-Intanethi ngokushesha, indlela entsha yokudlala imidlalo yevidiyo isiqalile ukubamba: the imidlalo yamafu.
Umqondo wokudlala ngamafu awuhlukile kakhulu emidlalweni yakudala eku-inthanethi etholakala kwi-Intanethi, ngomehluko wokuthi ngalezi zingxenyekazi zamafu kungenzeka namuhla. dlala nemidlalo yevidiyo esezingeni eliphezulu kakhulu (njengeCyberPunk 2077), edinga i-PC enekhadi lemifanekiso elizinikele noma ikhonsoli efana ne-Playstation 4 noma 5. Ngisho usebenzisa i-PC ejwayelekile futhi ngaphandle kokuthenga noma iyiphi idivayisi ekhethekileNgakho-ke, ingadlalwa ngaphandle kwamabhulokhi nekhwalithi ephezulu yezithombe, ngoba izinsizakusebenza ezidingekayo zokuqalisa umdlalo zinikezwa amaseva anamandla akude, esixhuma kuwo nge-Intanethi ukuthola ukusakazwa komsindo / kwevidiyo komdlalo futhi sikuthumele okokufaka komyalo.
Kulesi siqondisi sizokukhombisa ungadlala kanjani ku-inthanethi ngaphandle kwekhonsoli noma i-PC yokudlala sisebenzisa izinsizakalo zemidlalo yamafu etholakala e-Italy futhi ifinyeleleka kalula ngisho nokuxhumeka kwe-inthanethi okungasebenzi ikakhulukazi (kusobala ukuthi, ngaso sonke isikhathi kuzodingeka sigweme ukuxhumana okuhamba kancane noma ukuxhumana kwe-ADSL, manje okungazifanele ngokuphelele izinsiza ezinikezwa inetha).
FUNDA NONKE: Idlalwa kanjani imidlalo ye-PC ku-TV
Idlalwa kanjani imidlalo yamafu
Njengoba kushiwo kusingeniso, singadlala efwini kuphela uma sinokuxhumeka kwe-inthanethi okuhlukile - cishe kuzo zonke izinsizakalo lokhu ukuphela kwesidingo (ngaphandle kweGeForce Now) njenge okwenzekayo esikrinini sethu kungukusakazwa okucindezelwe ingaphatha noma iyiphi i-PC noma ineminyaka engu-7 noma ngaphezulu emahlombe ayo. Ngemuva kokubona izidingo, sizokukhombisa ukuthi yiziphi izinsizakalo ongazisebenzisa e-Italy ngokudlala ngamafu nokuthi iziphi izesekeli onconywa ukuzisebenzisa ukwenza ulwazi lokudlala luphelele ngempela.
Izidingo zohlelo nenethiwekhi
Ukudlala ngamafu, sidinga ucingo lwasendlini lwe-inthanethi ngokubhaliswa okuyisicaba (ngakho-ke akukho okubhaliselwe okukhokhelwayo okukhokhelwayo noma ukuxhumana okungenawaya) okwazi ukuhlangabezana nalezi zidingo ezilandelayo:
Ijubane lokulanda: okungenani ama-megabits ayi-15 ngomzuzwana (15 Mbps)
Isivinini sokulayisha: okungenani ama-megabits ayi-2 ngomzuzwana (2 Mbps)
U-Whistle: ngaphansi kuka-100 ms
Ukuthola umphumela omuhle kakhulu sigwema ukusetshenziswa koxhumano lwe-Wi-Fi phakathi kwe-PC nemodemu futhi sikhetha ukuxhumana kwekhebula le-Ethernet: uma imodemu ikude kakhulu ne-PC esifuna ukudlala kuyo, singakwazinoma ukubheja Ukuxhumeka kwe-Powerline noma kuma-5 GHz Wi-Fi aphindayo ukwenza ngcono ukuzinza nesivinini sokuxhuma. Ukuhlola ukuxhumeka kwakho kwe-inthanethi yasekhaya futhi uthole ukuthi kufanelekile yini ukugembula ngamafu, sincoma ukuthi uvivinye isivinini ku-athikili yethu "Ukuhlolwa kwe-ADSL neFiber: Isilinganiso se-Intanethi Sikalwa Kanjani?", lapho kwanele ukupheqa phansi kwekhasi bese ucindezela inkinobho yokuhlola yokuqala ukuze wazi ngokushesha ukuthi sihlangabezana yini nezidingo ezisungulwe ngenhla.
Imidlalo yamafu iyatholakala e-Italy
Uma uxhumano lwethu lwe-Intanethi lwanele ukusizakala ngemidlalo yamafu, singakhetha kusuka kumasevisi amaningi ukuqala ukudlala ku-inthanethi ngokushesha ngaphandle kwekhonsoli nangaphandle kwe-PC yokudlala.
Insiza yokuqala esincoma ukuthi uyizame yile I-Google Stadia, itholakala kuwebhusayithi esemthethweni futhi isebenza ngesiphequluli se-Google Chrome (esizofakwa kukhompyutha yethu).
Ngale nsizakalo, kwanele ukuba ne-akhawunti yakwaGoogle bese ubhalisela ukubhaliswa kwanyanga zonke okungu- € 9,99 ukuze udlale imidlalo eminingi ngokushesha, ngisho naleyo yakamuva kakhulu, ngekhwalithi yokudlulisa ephezulu kakhulu nokuphendula komyalo ezingeni eliphezulu kakhulu ( sibonga amaseva we-Google azinikele).
Uma sifuna ukuletha iGoogle Stadia egumbini lokuphumula futhi sidlale imidlalo ku-TV, singacabanga ukuthenga inqwaba ye-Stadia Premiere Edition, enikezela isilawuli se-wadi yezitadi Kuyinto a I-Chromecast Ultra ukudlala efwini kunoma iyiphi i-TV.
QAPHELA: Uma ufuna zama iStadia mahhala futhi uqinisekise ukuthi uxhumano lwakho lwe-inthanethi lushesha ngokwanele ukusakaza imidlalo yevidiyo, ungakwenza lokho ngaphandle kokunikeza ikhadi lesikweletu. Udinga kuphela ukubhalisela i-akhawunti yesilingo futhi ngaphambi kokuphothula ukubhalisa, sebenzisa inketho ukuhlola insizakalo imizuzu engama-30. Okulandelayo, funa omunye wemidlalo yamahhala enikezwe yiStadia Pro bese uqala ukudlala ukubona ukuthi isebenza kahle yini kwi-PC yakho.
Enye insizakalo esingayisebenzisela imidlalo yamafu yile IGeForce MANJE, eqhutshwa yi-NVIDIA futhi itholakala kuwebhusayithi esemthethweni.
Ngokubhalisela insizakalo nokulanda uhlelo oluthile kudivayisi yethu sizokwazi ukudlala mahhala ngaphandle kwemingcele ihora elilodwa ngosuku, kepha ngokufinyelela okungahambi kahle (kuzofanele sithole indawo yamahhala kumaseva); Ukudlala yonke imidlalo ngokushesha, ngaphandle kokulinda nekhwalithi ephezulu yezithombe (ngokusebenza kwe-NVIDIA Ray Tracing), vele ubhalisele kokubhaliselwe kwe- € 27,45, okuzokhokhwa njalo ezinyangeni eziyisithupha. Ukuze ukwazi ukudlala kunezidingo ezisezingeni eliphansi ze-PC esetshenziswayo, ngoba uhlelo lokusebenza lusebenzisa ingxenye encane yezinsiza zohlelo: ukudlala kahle kwanele ukuba ne-PC ene-6GB ye-RAM nekhadi levidiyo elisekela iDirectX 4, njenge kubonwe ekhasini lezidingo ezisemthethweni. Ukudlala ngokunganaki ngokushesha, singacabanga ukusebenzisa i- INVIDIA SHIELD TV, i-HDMI dongle elungele ukusetshenziswa nemidlalo yamafu futhi itholakala ku-Amazon ngaphansi kwe- € 200.
Enye insizakalo enhle esingazama ukuyidlala ngamafu yile I-PlayStation manje, enikezwe ngabakwaSony futhi efinyeleleka kwiwebhusayithi esemthethweni.
Ngale nsizakalo singadlala izihloko ezitholakala ku-PS4 naku-PS5 futhi kwi-PC, konke okumele sikwenze ukulanda uhlelo oluthile lwe-Windows PC, ungene nge-akhawunti yakwa-Sony bese ukhokha okubhaliselwe kwanyanga zonke (€ 9,99 per inyanga). Uma sifuna ukudlala efwini egumbini lokuphumula phambi kwe-TV, singasebenzisa kahle i-PS Now ku-PS4 Pro noma i-PS5, ukugwema ukuthenga imidlalo nokudlala ku-inthanethi ngekhwalithi ephezulu kakhulu.
FUNDA NONKE: Ama-JoyPads amahle kakhulu we-PC
Ngokukhetha enye yezinsizakalo zemidlalo yamafu eboniswe ngenhla, sizokwazi ukudlala ku-inthanethi ngaphandle kwekhonsoli futhi ngaphandle kokusetha i-PC yokudlala (ebiza kakhulu), sikhokhe imali ekhokhwayo yanyanga zonke, noma sithenge ezinye izihloko zeqoqo lethu lomuntu siqu. (kuGoogle Stadia). Amanye amasevisi nawo amahhala ngokuphelele, kepha anokulinganiselwa kwesikhathi kanye ne-bandwidth, ngakho-ke akunakwenzeka njalo ukudlala njengoba ubona ngezinsizakalo ezikhokhelwayo. Uma ukuxhumana kwethu kwe-Intanethi kukuvumela, ake sizame imidlalo yamafu, ngoba manje amaseva nokuxhumana okusetshenzisiwe sekuvuthiwe ukukwazi ukuhambisa lonke ulwazi lokudlala ku-inthanethi, kugwenywe zonke izinkinga ezihlobene nezinto zakudala ( ikhadi levidiyo alisebenzi noma i-PC engasebenzi kahle).
Uma sizifela ngemidlalo yevidiyo, ungaphuthelwa uhlu lwe- imidlalo engu-60 yamahhala ye-PC.